संस्कृत भाषाः समाजवादी शिक्षा - A complete Nepali news portal based on news & views
संस्कृत भाषाः समाजवादी शिक्षा
- वाई.पी. आचार्य
२९ बैशाख २०७७, सोमबार २१:२८ May 13, 2020 Roshan
अहिले संस्कृत भाषाले विद्यालय शिक्षामा प्रवेश पाएसँगै बौद्धिक मथिङ्गलमा समेत तरङ्ग आउन थालेको छ । के यो पेरिनियलिष्टहरुले भने जस्तो व्याक टु बेसिस को संकेत हो ? के यो ईसेन्सलिस्टहरुले भने जस्तो आधारभूत मान्यता सर्वव्यापी र सर्वकालिक हुन्छन् भनि संस्कृत जस्तो आधारभूत विषयले फेरी महत्व पाउन थालेको हो ? यी पनि छलफलका विषयनै हुन् ।
मार्क्सवादी हौं भन्नेहरुले यो विषयको अलि विरोध गर्छन् । सामन्तहरुको भाषा भन्छन् । जातको आधारमा विभाजित यो समाजका केहि समुदायहरुले यो माथिल्लो जात भनाउँदाहरुको भाषा हो जुन हामीमाथि शोषण गर्ने अस्त्र हो भनी विरोध गर्छन् । केहि हिन्दु इतरका धर्मावलम्बीहरु धार्मिक अस्त्र हो भन्छन् । केहि हिन्दु कट्टरपन्थीहरु आफ्नो पेवा ठान्छन् । यी सबै अतिवादका धोतक हुन् ।
यी सबै कोणबाट संस्कृत भाषालाई हेर्न यो सानो आलेखमा सम्भव छैन । तर विश्लेषण हुन आवश्यक छ । म पाठक र विज्ञहरुलाई कुनै कोणका आधारमा तथ्यगत बहसमा ल्याउन आग्रह गर्छु । यस आलेखमा भने संस्कृत भाषालाई मार्क्सवादी चक्षुबाट चिहाउने चेष्टा गरिएको छ ।
विगतमा के गरियो ?
नेपालमा मार्क्सवादी हौँ भन्नेहरुबाट संस्कृत भाषालाई आस्थिक भाषा भनि आरोप लगाईयो र आमरुपमा त्यही अफवाह फैलाइयो । मार्क्सवादी हुनु वा भौतिकवादी हुनु भनेको संस्कृत भाषाको विरोध गर्नु हो भनियो । संस्कृत भाषा र राज्यसत्ताको साईनो देखाइ भाषा कमजोर पार्नु राज्यसत्ता कमजोर पार्नु हो भनि रणनीतिहरु बनाइयो । यसलाई पाण्डित्यवादी कर्मकाण्डिय भाषा भनि ब्राम्हणीय लेप लगाई इतरका समुदायहरुमा आक्रोश भराईयो । वेदको विरोध गर्नेलाई क्रान्तिकारी मानियो ।
इतिहासको कालखण्डमा शासकहरु भाषालाई पनि राज्य सत्ता टिकाउने साधनका रुपमा प्रयोग गर्छन् । तर भाषा साध्य होइन यसलाई जसले पनि र जुन सामाजिक अवस्थामा पनि (समाजवाद वा साम्यवादमा पनि) प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले साधनलाई भन्दा सारमा ठोक्नु पर्छ र साधनलाई आफुअनुकुल प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने माक्र्सवादी मान्यतालाई समेत लात हानेर मार्क्सवादी मुखुण्डो ओडियो ।
क्रान्तिकारीताको नाममा संस्कृत भाषाका पौराणिक ग्रन्थहरुमा आगो लगाइयो । चल्दै आएको संस्कृत विषय विद्यालयबाट हटाइयो । युद्धकालमा संस्कृत विद्यापिठहरुमा बम पड्काइयो । परम्परागत मान्यता र भाषा पढ्ने शिक्षालाई बुर्जुवा भनि बहिस्कार गरियो गराइयो । वर्णव्यवस्थालाई मात्रै व्याख्या गर्दै संस्कृत भाषा दलित जनजातीहरुको विभेदीकरण र शोषणको मुल कारण हो भनि उनीहरुमा गलत चेतना (false consciousness) भरीदियो ।
संस्कृत भाषा मन्त्र उच्चारण गर्न र वेद पाठ लाउन मात्रै प्रयोग हुन्छ भनी चेतनाको दायरा साघुँरो बनाउँदै लगियो । मार्क्सवादीवाद र संस्कृत विपरितार्थ हुन भन्ने कुबुद्धि कोचारिदिए माक्र्सवादी अभियन्ताले । प्राज्ञिक जगत मौन मात्र बसेन बरु मार्क्सवादी पण्डितहरुको पिछलग्नु बने वा कट्टरपन्थी भएर टाँसिए, समालोचक हुन सकेनन् । अनुसन्धानले स्थान नै पाएन ।
समाजवादी शिक्षा र संस्कृतको तादाम्यता
संस्कृत सबै भन्दा प्राचीन र समृद्ध भाषा भएको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । यसमा भाषा मात्र छैन सभ्यता छ, दर्शन छ, जीवनका मूल्य मान्यता छन् । विज्ञान यहिँ छ । भौतिकवादी चिन्तन यसै भित्र छन् । द्वन्द्ववाद यहिँ छ । मानवता यहिँ छ । राजनीति यहिँ छ । स्वतन्त्रता (liberation) यहिँ छ ।
मार्क्सवादले वस्तुगत अवस्थाको वस्तुगत विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्छ ।
समाजवादी शिक्षाले वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण भएका समालोचक र अवस्थाको वस्तुगत विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्छ । समाजलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्छ । संस्कृत भाषालाई अलग गरेर नेपाली समाजको अध्ययन गर्दा के वस्तुगत हुन्छ ? भाषा विज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा के नेपाली भाषा लगायत नेपालमा बोलिने अन्य भाषाको अध्ययनकालागि संस्कृत भाषा नामेट पार्नु वैैज्ञानिक हुन्छ ? अवस्य हुँदैन । संस्कृत भाषा स्वयं विज्ञान हो । विज्ञानको विरोध गर्नु मार्क्सवाद विरोधी हो ।
मार्क्सवादले कहि पनि र कुनै पनि भाषाको विरोध गरेको छैन । सबै भाषाको सम्मान गर्नु पर्छ भन्छ । भाषालाई साधन मान्छ । सबै भन्दा उपयुक्त साधनको उपयोग गरी साध्यमा पुग्नु पर्छ भन्छ । नेपाली समाजको उद्वविकास, मूल्य मान्यता, जीवन दर्शन, अनुशासन, अध्ययन पद्दती, साहित्य, कानुन, राजनीति जस्ता पक्षहरु संस्कृत भाषामा लेखिएका छन् । तिनिहरुको गहिरो अध्ययन संस्कृत भाषा विना सम्भव छैन ।
संस्कृत भाषामा लेखिएका सबै कुरा मान्न जरुरी छैन । तर जान्न आवश्यक छ । जान्दैमा ढोगि हुन्छ भन्ने होइन । मार्क्सवाद पनि मार्क्सवादीले भन्दा बढि पूँजीवादीहरुले पढेको तथ्य नकार्न सकिदैन । यदि त्यो गलत हो भने पनि त्यसको पुष्टि गर्न त्यसैको अध्ययन जरुरी छ । अध्ययनकालागि गतिलो माध्यम जरुरी छ । पूर्वीय दर्शन बुझ्न संस्कृत भाषा अपरिहार्य छ । मार्क्सले भने जस्तो नेपाली समाजको वस्तुगत अध्ययनकालागि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक र वस्तुगत साधन हो । त्यसैले यो मार्क्सवादसम्मत छ ।
कुनै पनि समाजलाई अध्ययन गर्दा स्वयं त्यो समाजले आफ्नो बारेमा कसरी सोच्छस त्यो पढ्न जरुरी छ । त्यसको इतिहास, भूगोल, भाषा, संस्कृति, साहित्य, फिल्म, मूर्ति, चित्र आदि अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्तै मार्क्सवादलाई कुन समाजमा जोड्ने हो जोडिने समाजको प्रकृति बुझ्नु पर्छ । मानव मुक्ति, सुख, सम्मृद्धि, उपभोगमा समानता माक्र्सवादको मुटु हो ।
यता पूर्वीय दर्शनमा भनिएको छ– सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्चयन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् (सवै सुखि होउन्, सवै आनन्द रहुन, सवैले राम्रो देखुन् कसैलाइ दुःख आइनलागोस्) । त्यस्तै तापत्रयः आध्यात्मिक (शरीरको कारणबाट उत्पन्न ताप), आदिदैविक (महाप्रलय), आदिभौतिक (दुर्घटना) बाट मुक्ति पाउनु मानव लक्ष्य हो । नेपाली समाजले वोकेको दर्शन यहि हो ।
यहाँ मानव मुक्तिका सवालमा मार्क्स र पूर्वीय दर्शन निकट देखीए । अब नेपाली बुझाइबाट मार्क्सवाद पढाउनु पर्छ । यसकालागि संस्कृतभाषा विना त्यो अपुरो हुन्छ । नेपालमा जात, भाषा, क्षेत्रका आधारमा असमानता छ, शोषण छ । मनुस्मृति नबुझि नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्नु टाउको दुखेको औषधी नाभिमा लगाए जस्तो हुन्छ । उपनिषद्ले बाँडे जस्तो परा (दिमागी काम), र अपरा (शारीरिक काम) का आधारमा विभेद छ । यो नबुझि नेपाली समाज बुझिदैन । यसकालागि उपनिषद् जान्नु पर्छ । संस्कृत भाषा नजानी नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्दा त्यो आयातित हुन्छ । फिट नहुन सक्छ ।
न्याय, वैशेसिक दर्शनले भगवान मान्दैनन्, साङ्ख्य दर्शनमा द्वन्द्ववाद छ । यीनीहरुले पदार्थ र चेतनाको एकत्वमा जोड दिन्छन् । बुद्ध दर्शन निजी सम्पत्तिको खिलाफमा छ । यसले भगवान मान्दैन, मानिस प्राकृतिक रुपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्छ, वस्तुनिष्ठ कुरा गर्छ, व्यक्तिलाई पुर्णतामा हेर्छ । यी दर्शनहरु मार्क्सवादसँग नजिक छन् । यहि नेपालीपन अनुसार मार्क्सवाद जोड्नु पर्छ ।
अब किन संस्कृत भाषाको महत्व बढ्यो ?
अबको शिक्षा प्रणाली समाजवाद उन्मूख नभै धरै छैन । त्यो समाजवाद नेपाली विषेशताको समाजवाद हो । शिक्षा नेपाली माटोको हो । नेपाली माटोसँग संस्कृत भाषा जोडिएको छ । त्यसैले निम्मकारणले गर्दा पनि समाजवादी शिक्षामा संस्कृत भाषा अपरिहार्य छ ।
क) मानवताको विकास : मार्क्सवादको मूल मर्म मानिसलाई मानिस भएर बाच्न पाउने वातावरणको निर्माण हो । हाम्रा पूर्वीय दर्शन मूलतः मानिसको पूर्ण विकासमा केन्द्रित छन् । भौतिक र आध्यात्मिक विकासमा केन्द्रित छन् । आधुनिक विज्ञानले समेत आध्यात्मलाई नकार्न सकेका छैनन् । आध्यात्मकता भगवानमा विश्वास भन्ने होईन । यो त स्व–पहिचान हो । आत्मानुभूति हो । विद्या हो शिक्षा होइन । नेपाली समाजवादी शिक्षाले विद्या र शिक्षालाई जोड्ने हो र एक पूर्णमानव बनाउने हो ।
ख) विश्वपरिवेशः विश्वीकरणबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन । यसले पहिचानको संकट निम्त्यएको छ । राष्ट्रवादी पहिचान धरापमा परेको छ । यी संकट अझै बढ्दै जानेछन् । नयाँ पुस्तालाई मेनुपुलेट गर्न निकै सजिलो भएको छ । यसकालागि पूर्वीय दर्शन, मूल्य मान्यता अध्ययन गराउन जरुरी छ । त्यसको ढोका खोल्न संस्कृत भाषा सिकाउन जरुरी छ ।
ग) डिजिटाईजेशनः डिजिटाईजेशनको प्रभावले मानव जातिको अस्तित्वनै संकटमा पर्दै छ । कृत्रिम बौद्धिकताको प्रसारसँगै मानवीयता उजाड हुँदै छ । अनुशासन तोडिदैछ । गोपनियता भङ्ग हुँदैछ । ठूला डाटा बैङ्कहरुले मानबलाई नियन्त्रण गर्ने समय आउदैँछ । स्कुलको दायरा साघुँरिदै जाने छ । कसैले नसिकाएर पनि तमाम भौतिक कुरा सिक्ने छन् । तर अनुशासन मूल्य मान्यता नैतिकता मानवीयताको खडेरी पर्ने छ । यी कुराहरु सिकाउन हाम्रा मौलिक दर्शन सिक्नु पर्नेछ ।
घ) भारतमा डा. कस्तुरीनन्दनको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले २०१९ मा बुझाएको रिपोर्ट अनुसार भारतको उन्नतिकालागि परम्परागत दर्शन र मूल्य मान्यता शिक्षाका सबै तहमा प्रतिविम्वितहुनु पर्ने भनेको छ ।
चीनमा सि जिङ् पिङ् ले मार्क्सवाद र त्यहाँका मौलिक दर्शनहरु जस्तै ताओईजम् कन्फ्युसियनिजम्लाई मिलाउने भनेका छन् । आर्थिक समृद्धिकालागि आधुनिकतावाद र नैतीकताकालागि मौलिक दर्शनमा जोड दिइएको छ । नेपालमा पनि उदियमान जनशक्तिलाई पूर्वीय दर्शन यस भित्रका विज्ञान, सामुहिकता, पारिवारिक संरचना र मान्यता सिकाउन जरुरी छ । यीनैबाट नै नेपालको पहिचान रहन सक्छ । अनुशासित, भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । अनुशासन बन्दुकको बलमा विकास हुँदैन। यसो हुँदो हो त विश्वबाट नै भ्रष्टाचार निर्मूत हुन्थ्यो, बरु बढेको छ । आत्म अनुशासन नै सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो । यो मान्यताबाट विकास हुन्छ । पूर्वीय दर्शन नेपालीको जीवन दर्शन भएकोले यसको विकल्प छैन । यसको साधन फेरि पनि संस्कृत भाषा हुन सक्छ ।
संस्कृत भाषा कुनै धर्म विशेषको होइन । जात सम्प्रदायको पेवा पनि होइन । कर्मकाण्डीय साधनमात्र होइन । यो कुनै दर्शनविषेशको पक्षपाती पनि छैन । यो केवल साधन हो । यसको उपयोग गरी एक पूर्णमानव बनाउन अबको शिक्षा पद्दती अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यसले असमानता होईन समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउने छ । अर्कातिर तल्लो तहदेखि बहुभाषा सिक्दा बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा सघाउने छ । सबैले सधै यो भाषा पढिरहनु पर्दैन । आधारभूतकुरा सिकाए पुग्छ । थप विकास त रुची अनुशार गर्ने हो ।
म जस्ता एउटा पुस्ता संस्कृत भाषा सिक्न नपाउँदा अहिले गीता जस्ता ग्रन्थ पश्चिमाले अनुवादन गरेका अंग्रेजीमा पढेर बुझ्नु परेको छ । उनीहरुको ईन्टरपिटेसन हामीले पढ्नु परेको छ । कम्तीमा यो दशा आगामी पुस्ताले नभोगोस ।
कपिलवस्तु जिल्लालाई जेठ ५ गतेसम्म सिल गरिने
नेपालमा एकै दिन ५७ जनामा कोरोना देखियो